Dingana 25 mankany amin'ny fahombiazana: Fanatsarana motera fikarohana sy bilaogy bilaogy | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 17, 2009 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ho fanomanana ny Blog Indiana, ary niaraka tamin'ny fanampian'i Bryan Povlinski, nandefa ebook 75 pejy aho miaraka amin'ny torohevitra, torohevitra, hafetsena ary tsiambaratelo fanatsarana motera fikarohana ary bilaogin'ny orinasa.
Nanome kopia maherin'ny 100 izahay tao amin'ny Blog Indiana ary tsy nampino ny valiny. Tena tiako ny fanohanana rehetra!
Koa satria ity no e-book voalohany ananako dia nahazo torohevitra vitsivitsy avy amin'ireo mpitoraka bilaogy hafa aho izay nametraka e-book tamin'ny Internet. Ny torohevitra voalohany azoko dia ny hampihena ny vidiny (amin'ny $ 99) mandritra ny fotoana voafetra. Tanjona roa no ampiasaina…… mivoaka amin'ny fivezivezena ny ebook amin'ny alàlan'ny fanaovana azy ho kely lafo kokoa ary mamokatra buzz manodidina ny boky izy io.
Ampidino ny lisitry ny atiny ary ho hitanao fa feno tokoa ity boky ity. Hotazomiko mandritra ny fotoana fohy ny vidiny $ 9.99 - mandra-pisintomana kopia ampy izay manomboka mahita buzz vitsivitsy aho. Ka atombohy ny buzzin!
Aug 18, 2009 amin'ny 9: 09 AM
Douglas tsara indrindra ho anao ebook vaovao,
19 Aogositra 2009 amin'ny 5:14 PM
Soa ihany aho fa nahazo kopia an'ity ebook ity tao amin'ny Blog Indiana sy WOW. Sarobidy mihoatra ny $ 9.99! Tena feno atiny lehibe momba ny SEO izy io. Tsy mbola vita akory ny antsasak'adiny tamin'ilay boky ary efa nanapa-kevitra ny hanao pirinty azy aho ary hitazona azy io ho toy ny birao. Tsy ho diso fanantenana ianao! Asa tsara Doug & Bryan!
24 Aogositra 2009 amin'ny 5:01 PM
Mahatalanjona, Doug! Manantena aho fa lafo be izany!